Pogba oo guri cusub ka iibsaday halka ay ku ciyaarto Barcelona…(Waa sidee xaalka?) – Gool FM
Pogba oo guri cusub ka iibsaday halka ay ku ciyaarto Barcelona…(Waa sidee xaalka?)
Byare May 31, 2016
(Turino) 31 Maajo 2016. Xiddiga qadka dhexe ee naadiga Juventus Paul Pogba ayaa guri cusub ka iibsaday magaalada Barcelona taa oo sare u sii qaday qiyaas fikradeedka laga qabo inuu goor dhow ka tago kooxda reer Talyaani.
Wiilka reer France ayaa noqon karaya laacibka ugu qaalisan suuqa kala iibsiga xagaagan waa haddii uu doorto inuu isaga huleelo Bianconeri, koooxaha sida Barcelona, Chelsea, Real Madrid iyo BSG aya ka mid ah kooxo doonaya inay ka bixiyaan 100-milyan oo bound.
Pogba ayaa walaac ku abuuray taageerayaashiisa Talyaaniga kaddib markii uu guri ka iibsaday Barcelona halka ay ku ciyaarto kooxda lagu naaneyso Blaugrana.
Sikastaba, warbixin ay soo saartay Proto Group Ltd oo guriga u iibisay Pogba ayaa sheegtay inaysan sheekadan khuseyn kubbada cagta.
“Iibsashda Villa ku taal Barcelona wax xiriir ah haba yaraatee lama lahan arrimaha kubbada cagta,” Waxaa sidaa yiri agaasimaha guud ee shirkadaa sida ay warisay La Repubblica.4
Agaasimaha shirkadan ayaa sidoo kale sheegay in usbuucyo yar ka hor ay sidan oo kale ku dhacday Lionel Messi oo guri ka iibsday Paris iyo Cristiano Ronaldo kaa oo guri ka iibsaday New York.
RASMI: Granit Xhaka oo iska badalay lambarkii laga siiyay Arsenal ee "16" isla markaana qaatay lambar cusub!
"Wax ciyaartoy ah kama soo qaadanayo Portugal,". Muxuu hadalkan ula jeedaa Jose Mourinho